Guangzhou Ontime International Logistics Co., Ltd. (izay antsoina hoe GZ Ontime) dia hita ao amin'ny Distrikan'i Baiyun, Guangzhou. Izahay dia masoivohon'ny DHL, UPS, TNT, FedEx, làlana manokana Amazon (alefa mivantana amin'ny FBA), ny fitaterana an-dranomasina, ny fiakaran'ny rivotra, ny fitaterana an-dalamby sy ny kamio. Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny filôzôfia momba ny "mpanjifa aloha, mandroso aloha" ary ny fitsipiky ny "mpanjifa aloha" hanomezana ny mpanjifanay serivisy kalitao tsara indrindra. Tongasoa eto mangataka teny nindramina!
GZ Ontime Logistics dia orinasam-pitaovana iraisam-pirenena matihanina manana traikefa 10 taona eo amin'ny sehatry ny fandefasana entana iraisam-pirenena. GZ Ontime afaka manome asa fanompoana toy izany eto ambany: Import fananana manokana sy ny fanondranana, ary ny fanondranana entana entana Import forwarders, fitaovana goavana fanondranana, fampirantiana ny fitaterana, sy ny fomba amam-panao warehousing fitaovana fangatahany fahazoan-dalana.
Manaraka ny foto-kevitry ny fiarovana, hafainganam-pandeha, fahitsiana ary toekarena, manome ny mpanjifa amin'ny fitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena sy an-toerana, Express express (FEDEX, DHL, UPS, TNT, EMS), fitaterana an-tanety, serivisy fitaterana an-tsambo, azontsika atao koa fitaterana zotra manokana mankany Hong Kong, Macao, ary Taiwan.
Ny orinasanay dia manana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo tompona sambo toa ny apl msk cscl.
Ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia manana tombony amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy serivisy mivantana. Afaka nanaiky ny asa fitaterana an-dranomasina sy an-dranomasina eran'izao tontolo izao izahay.
Ny orinasa dia miantehitra amin'i guangzhou ary miorina ao amin'ny delta renirano, guangdong, taratra manerana ny firenena, miaraka amin'ireo mpiara-miasa maharitra any beijing, Shanghai, tianjin, qinghai, dalian ary tanàna hafa.
Mandritra izany fotoana izany dia natsangana ny tambajotram-pitaovana fampandehanana entana feno eran-tany, izay afaka manome serivisy serivisy isan-trano ho an'ny mpanjifa manerantany. Eo an-toerana izahay. Manerantany isika. Izahay na aiza na aiza no tadiavinao sy ilanao.
Fantatray ny làlana, ny safidy, ny sarany, ny sarany ary ny fomba tsara indrindra handefasana ny entanao.
Avelao izahay hanangana anao ny sehatry ny lozisialy tonga lafatra izay mitazona anao amin'ny orinasa maharitra. Ho tonga soa aman-tsara sy tonga ara-potoana ny fandefasana anao ary hamonjy anao mandritra ny fotoana maharitra.